Myanmar Gays Heaven: စွမ်း စွမ်း ပါတဲ့ဗျာ...............
Posted by Myanmar Gays Heaven at 10:30 AM
Htoo Phyoe April 20, 2014 at 9:42 PM
လီးက မဆိုးဘူး ဒါ​ပေမယ့်​ငါကချချင်​တယ်​
Anonymous October 9, 2014 at 1:37 AM
ygn295@gmail ပါ။ top များသာ add ပေးပါ။ gtalk ကျမှ စကား ပြောမည်။ အတည်တွဲချင်သူသာ
Anonymous May 22, 2017 at 1:34 AM
ကြိုက်တယ် ဖင်ချပေးချင်တဲ့offer boy များ 09449971080 ကို vibe ခေါ်ပေးပါ
Anonymous April 21, 2014 at 12:50 AM
Anonymous April 21, 2014 at 1:30 AM
Fair size cock. BUT I am not B. iremember528
d lee ko like tal ph ma shee bu lar?khan chin lo.coldlily99@gmail.com
Anonymous July 26, 2014 at 6:27 AM
မုံရွာမှာ Gay မရှိဘူးလား? ဖုန်းနံပါတ်ရချင်တယ်?
Gay မရှိဘူး Top only ပဲ ရှိတယ် စိတ်ဝင်စားရင် အကြောင်းပြန်ပါ ဖုန်းနံပါတတ်ပေးမယ်
Anonymous August 14, 2014 at 9:06 PM
komg kyue159 October 16, 2016 at 1:36 PM
ဖင်​အရမ်းလိုးခံချင်​တယ်​ မန်း​လေးကိုလာခဲ့​​လေ ကိုယ်​အားလုံးတာဝန်​ယူပါ့မယ်​
Chit Chat December 18, 2015 at 5:07 PM
koaungmyo myint March 12, 2017 at 1:53 AM
မန်းလေးကပါ ၃၅years man to man ဆက်သွယ်ပါ
mail or phထားခဲ့ပါအပ်လိုက်မယ်မန်းလေးကဘဲ
Anonymous September 4, 2014 at 11:04 AM
မင်းထားပေးပါလား ph gmail ငါ မန်းလေးကဆက်မယ်
မန်းလေးကပါ ၃၀ကျော်ပါman to man စိတ်ဝင်စားတယ်
မုံရွာက တွေ့မယ် ဖုန်းပေး
မုံရွာက ရှိတယ် Top only ပဲ စိတ်ဝင်စားရင်အကြောင်းပြန်ပါ ဖုန်းနံပါတ်ပေးမယ်
leo man September 21, 2014 at 3:18 PM
တောင်ကြီးကပါ man to man
Aung Win April 24, 2017 at 8:47 AM
Anonymous January 31, 2015 at 3:06 PM
စွမ်းနဲ့သိချင်​တတယ်​ ဖုန်းနံပါတ်​သိချင်​တယ်​ thailand. ​ရောက်​သူတဦး
Peter König October 26, 2014 at 8:47 PM
wow..yes Penis, email: p.Koenig116@gmail.com
adiba akter November 19, 2014 at 9:13 AM
Anonymous December 21, 2014 at 1:05 AM
I like this photo and send me gmail, 1hnaryuu@gmail.com, Sor nal mate sat pay hmar par, ygn only
Iron Dragon January 3, 2015 at 12:31 PM
ygn ka bot 0936073294
0936073294 Ygn bot
crazy man March 10, 2015 at 10:24 AM
G talk add ပေးကြပါ
Top men များ. XD
Naing Tun April 10, 2015 at 4:11 PM
mdy ပါဘဲ ဖင်လိုးချင်လို့
htay Ye'htoo May 29, 2015 at 12:14 PM
mdy viber09797508802 need top
htay Ye'htoo May 29, 2015 at 12:13 PM
09261583140 ဖင်ခံချင်သူတွေနော်ညဘက်ဖုန်းဆက်ပြီးsexအကြောင်းကောင်းကောင်းပြောတတ်ရင်ဆက်ပေါ့ဗျာညနက်လေကောင်းလေပါ ပြောရင်းနဲ့လိုးချင်လာပြီးးး
koaungmyo myint March 12, 2017 at 1:55 AM
Your Dick June 13, 2017 at 2:54 AM